Fantaro ny tena fahombiazana ho anao – Blaogin'i Voniary
Fantaro ny tena fahombiazana ho anao
Ekena fa eo ireo fenitra napetraky ny rafitra sy ny fiarahamonina, ny tena marina anefa dia samy manana ny fahombiazany ny tsirairay. Ao ireo mieritreritra fa rehefa mahazo fiara izy dia izay no atao hoe tafa aminy. Ao kosa ireo manana tanjona hahazo toerana ambony ara-politika satria izay no atao hoe fahombiazana aminy. Misy kosa ireo tia mandray anjara amina fifaninana ka rehefa mahazo voalohany izy dia safononoka ery ny hafaliany. Betsaka ny azo lazaina mikasika io fahombiazana io satria ny olombelona tsirairay dia tokony samy hanana ny famaritany ny hoe fahombiazana.
Raha ho avy Ralala ny fotoana hodiako….
Stephen Covey, ilay psikôlogy amerikanina malaza izay nanoratra ilay boky « ireo fahazarana fito an’ny olona tena mahomby » dia nilaza fa izay zavatra tianao holazain’ny olona amin’ny fotoam-pandevenana anao no tanjom-pahombiazana ho anao. Alaivo sary an-tsaina hoy izy ianao miampatra ao anaty vatam-paty ao am-piangonana iny. Araka ny fomban-dry zareo tandrefana amin’ireny fotoana ireny, izay efa maro mpanaraka koa eto amintsika, dia misy solontena avy amin’ny fianakaviana, namana, mpiara-miasa sy mpiray fikambanana mandray fitenena.
Fandevenana ny Profesora Zafy Albert.
Alaivo sary an-tsaina izay holazain’ny olona rehefa tonga ny andronao
cc : triatra.info
Alaivo sary an-tsaina ary hoe inona no ho lazain’ireo olona ireo ny amin’ny fivahiniananao tety an-tany. Fantaro hoe inona no tianao hambaran’ny vadinao na ny zanakao momba ny fifaneraseranao tamin’izy ireo tao amin’ny ankohonanao. Inona no irinao hotenenin’ilay namanao akaiky mikasika ny fahaizanao mifandray aman’olona ? Inona no satrinao hotanisain’ny mpiara-miasa raha ny fiainanao teo amin’ny sehatry ny asa no asian-dresaka ? Ary inona no heverinao holazain’ilay mpiray fikambanana aminao ny amin’ny fandraisanao anjara teo amin’ny fiarahamonina sy ny firenena ? Raha zohina manko dia azo fintinina amin’ireo sehatra efatra ireo ny fiainan’olombelona : ny fianakaviana, ny fifandraisana amin’ny namana, ny fiainana any am-piasana ary ny fandraisana andraikitra eo amin’ny fiarahamonina sy ny firenena. Dia fantaro fa ny teny tianao ho re avy amin’ireo olona ireo no fahombiazana aminao ary tokony hataonao tanjom-piainana. Manaova fanazarana kely hoe : makà dimy minitra hilonana ao anatin’io fakana sary an-tsaina io dia ho hitanao ny tena atao hoe fahombiazana aminao manokana.
Satria tsy manan-tsahala ianao
Mpanoratra Ghaneana iray Lauren Jacobs indray no hozaraiko aminao. Raha nanontaniana izy ny amin’ireo fahombiazana teo amin’ny fiainany dia izao no navaliny : « Ireo zava-nitranga mahavelom-pisaorana ahy, ireo nanohina ny foko manokana ary ireo nanome hery vaovao hanohizako ny diako. Ireo no fahombiazana amiko, izay fantatro fa tsy araky ny famaritana fantatry ny besinimaro ». Dia raha nitanisa tokoa izy dia zavatra tsy dia mahazatra no nolazainy : ny fihaonana tamina olo-malaza, ny fahafahany mampita fahalalana amin’ny vehivavy mpiray tanindrazana aminy, ny nahavitany namoaka boky telo tao anaty edisiona malaza, ny fampiasana ny tononkalony tamina hetsika iray ary ny nahavoafidy azy tao anatin’ireo vehivavy mpitarika mendrika teo amin’ny fireneny tamin’ny 2015.
Toetra mendrika ny fahaizana mankasitraka
cc : Pexels
Toetra mendrika tokoa ny fahaizana mankasitraka toy izany satria manome hery iatrehana ny fiainana sy mahavelom-panantenana hatrany. Fanampin’izany dia mety ihany koa ny mahay mametraka tanjona kelikely hotratrarina eny antsefatsefany eny mba hahatongavana amin’ny tanjona goavana iray. Ny anton’izany dia ny mba hampisy mari-piatoana hanovozanao angovo indray, mba tsy ho ezaka lavareny foana ny fiainana fa mba hisy fifaliana ihany koa. Avy aminao, izay fanirianao lalina indrindra ihany anefa no tsara iavian’ireo tanjom-pahombiazana ireo fa tsy tokony avy amin’olon-kafa. Amin’izay, tsy ho sasatra mampitaha ny fiainanao amin’ny an’ny hafa ianao, tsy haharary fo sy loha amin-java tsisy dikany, fa hifantoka amin’ny fahombiazanao hatrany. Amin’izay koa tsy ho velom-pialonana ianao raha mahomby amin’izay ataony ny fa ho faly sy hanohana azy satria fantatrao fa mbola ho avy koa ny anjaranao.
Fantatro ny tena fahombiazana amiko
Amiko manokana izao, fahombiazana ho ahy ny nahavoasafidy ny Blaogin’i Voniary ho blaogy mendrika indrindra ao anatin’ny sokajy « Teny Gasy » tao anatin’ilay fifaninana BOMBS 2019. Dibo-kafaliana tokoa ny tenako ary ankasitrahako anareo mpanaraka sy ny mpitsara indrindra izany. Dingana iray anefa iny no vita fa mbola lavitra ny lalan-kaleha, mbola maro ny tanjona hotratrarina. Raisiko ho solika hampiredareda indray ny fitiavako manoratra sy mizara amin’ny blaogy iny. Manantena aho fa ianao koa dia hanana ny fahombiazana ho anao manokana, tsy miankina amin’izay baikon’olona sy ny vavan’ny hafa.
fahombiazana, manana tanjona, mpandresy ianao, tanjona mazava
Ny fokonolona araka ireo kabary nataon’ny Kôlônely Richard Ratsimandrava eran’ny nosy 1973 – 1975
Free Sell : paikady vaovao be hampifandraisana ny tanora mitady asa sy ny orinasa madinika
2 commentaires sur “Fantaro ny tena fahombiazana ho anao”
rhf18 dit :
Mankasitraka indrindra fa mamelombelon’aina tokoa ity lahatsoratrao iray ity, dia mirary fahombiazana ho antsika rehetra hatrany
Isaorana ihany koa ny mpamaky e!